Indlu enomtsalane yaseNastorp - I-Airbnb
Indlu enomtsalane yaseNastorp
Nävekvarn, Södermanlands län, Sweden
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguHelena
Wamkelekile kule ndlu intle yakhiwe ngenkulungwane ye-19 kwaye yalungiswa ngo-2018, inomtsalane wayo wakudala ugcinwe kakuhle. Ime ngaphandle nje kweNävekvarn - ilali encinci empuma Södermanland. Indawo esikuyo ibonelela ngokusondeleyo kuzo zombini uLwandle lweBaltic kunye namahlathi aseKolmården. I-cottage ijikeleze i-45 m2 enkulu kwaye inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela, igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala.
Kwigumbi lokuhlala kukho ibhedi ye-sofa eguqulwayo, ephethe iibhedi ezimbini ze-80 cm. Kwi-master bedroom kukho ibhedi ye-160 cm. Ibhedi yomntwana iyafumaneka. Ihlobo lika-2019 kuya kubakho ipatio encinci ene-barbeque kunye nokutya okunokwenzeka okufumanekayo ngaphandle kwe-cottage, okwenza kube lula ukonwabela ukukhanya okude kobusuku basehlotyeni baseSweden.
Siyathemba ukuba uya kuyonwabela i-cottage yethu encinci, enokwenzeka ukuba uhlale unyaka wonke kwaye ufudunyezwe ngokufudumeza kombane kunye nesitovu somlilo.
4.98 · Izimvo eziyi-45
Sineemitha ezingama-800 ukuya kunxweme lwaseBråviken (ulwandle lwaseBaltic) nethuba lokufumana abantwana kwiilwandle ezinesanti ezinobuhlobo okanye amawa akho angasese. Sijikelezwe ngamahlathi anzulu ase-Kolmården, kunye neendlela zokuhamba (i-Södermanlandsleden) kunye nezinye iintaba zaseSweden ezintle zokunyuka (i-Simonsberget kunye ne-Bistaberget). E-Nävekvarn uya kufumana i-marina, ivenkile yokutya kunye nexesha lasehlotyeni indawo yokutyela.
Eminye imisebenzi esiyicebisayo kwindawo:
Izilwanyana zaseKolmården iikhilomitha ezingama-25
Nyköping 22 km
Ikhosi yegalufa e-Ärila 18 km
Ikhosi yegalufa yaseKiladalens 30 km
I-Nävsjön iikhilomitha ezi-6 (ichibi lehlathi elinokuloba iinyamakazi kunye nokuba nokwenzeka kokuloba ilayisensi yokuloba)
Ukuba ukhwele isithuthuthu siya konwaba ukucebisa uhambo lwasemini oluninzi olugqibeleleyo kwindawo. Singakuboleka iibhayisekile.
Le ndlu ikwiimitha ezingama-20 ukusuka kwindlu enkulu esihlala kuyo. Indawo yethu yonke yi-4500 m2. Ipatio yakho ikwindawo esemazantsi yendlwana ngelixa ipatio yethu ikwindawo esemantla yendlu enkulu. Oku kuthetha ubumfihlo kuwe kunye nathi.
Siya kukwamkela kwi-cottage kwaye unganqikazi ukuqhagamshelana nathi ngoncedo. Sithetha isiSwedish nesiNgesi, siqonda isiJamani kwaye sinentombi esazi kakuhle isiFrentshi.
Le ndlu ikwiimitha ezingama-20 ukusuka kwindlu enkulu esihlala kuyo. Indawo yethu yonke yi-4500 m2. Ipatio yakho ikwindawo esemazantsi yendlwana ngelixa ipatio yethu ikwindawo esem…